Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguKatherine
Le fama intle yeVictorian ime kwisiqingatha sehektare ineembono ezintle zeNtaba iGreylock, iintaba ezingqongileyo kunye nedolophu entle yaseAdams. Iveranda ejikelezayo ikulungele ukuphumla. Inefenitshala epheleleyo kwaye inekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo. Kukho isitovu seenkuni kwigumbi lokuhlala kobo busuku bubandayo. Umgama wokuhamba ukuya eAdams/kwivenkile enkulu. Ukuqhuba ixesha elifutshane kuMntla Adams (MASSMoCA), Williamstown (iMyuziyam yaseClark) kunye neJiminy Peak (i-ski resort) eyimizuzu engama-30 yokuqhuba.
Indlu ikwimeko egqibeleleyo kuyo yonke imigangatho yokhuni yantlandlolo. Kukho iveranda ethandekayo ejonge igadi enkulu enombono weMount Greylock. Kukho izitulo kwindawo yegadi. Ikhitshi likwajonge egadini. Igumbi lokutyela elahlukileyo livula kwiveranda esecaleni. Igumbi lokuhlala linesitovu somthi ngoko ke nceda ucwangcise ukubonelela ngeenkuni zakho. Kukho igumbi lokuhlambela elikumgangatho ophantsi kunye negumbi lokuhlambela eliphezulu. Indlu inefenitshala kodwa hayi kakhulu, ngoko ilula kwaye inomoya. Kukho igumbi lokulala elikhulu elinebhedi enkulu kunye namagumbi amabini amancinci aneebhedi ezigcweleyo. Kukho indawo yokugcina kwigumbi lokulala ngalinye. Amashiti kunye neetawuli zibonelelwa, kunye nezinto zangasese eziyimfuneko. Asithandi ukushiya ukutya kuthe ngcu kodwa ngamanye amaxesha kukho izinto ezisisiseko efrijini kunye/okanye kwipantry.
Indlu ikwidolophu yaseAdams, idolophu ethandekayo. Ibekwe endulini, indlu ikwindawo ezolileyo. Iimbono ezimangalisayo zeentaba ezijikelezileyo. Indawo zokutyela ezinkulu ezikufuphi eNorth Adams, Williamstown, Pittsfield. Malunga nemizuzu eyi-10. qhuba uye eChesire apho unokuthenga imveliso entsha emangalisayo kwaWhitney's. Kukwakho neemarike zamafama eMntla Adams, njalo njalo kodwa kufuneka ukhangele imihla/amaxesha. Yonke into emgama wokuqhuba. North Adams, MassMoCA, Clarke Museum e Williamstown. Iindlela zebhayisekile ezinkulu ezikufutshane. Neendlela zokuhamba.
Ndiya kuhlala ndifumaneka nokuba ngefowuni/itekisi okanye i-imeyile ngayo nayiphi na imibuzo ekufuneka ubenayo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Adams